Sisithumela Nini Isaziso Sezomthetho E-UAE | Izinkampani Zomthetho eDubai
Sithumela Nini Isaziso Sezomthetho E-UAE
Zonke izindlela zokuxhumana okuhlelekile zilandela amalungiselelo ahlelelwe ukuhlelelwa noma ifomethi okufanele yenziwe yilowo nalowo muntu obandakanyekayo. Isaziso somthetho siyisibonelo sokuxhumana okunjalo okuhlelekile nefomethi yaso echaza uhlobo lolwazi oludinga ukunikezwa kwisaziso nokuthi lufanele lunikezwe kanjani.
Ummeli we-UAE noma uchwepheshe wezomthetho angasiza
ukuqasha ummeli onolwazi
ukuqala isinyathelo ngaphambi kwecala elisemthethweni
Kubalulekile ukuthi ulandele ifomethi yokuloba nokuthumela inothi esemthethweni. Uma wenziwe kahle, ungathola ikhambi elisheshayo lenkinga. Isaziso somthetho siyakuqinisekisa ukuthi wena nomemukeli niyavumelana nemibandela yalolu daba futhi nigweme ukuluxazulula enkantolo lolu daba.
Yini Isaziso Sezomthetho?
Lokhu kungumbhalo obhalwe phansi othunyelwe kumthumeli owazisa owemukelayo ngezinhloso zokuthatha izinyathelo zomthetho ngokumelene nalokhu. Umthumeli wenza iqembu elamukelayo lazazi izikhalazo ngesaziso esingokomthetho. Kusebenza njengesexwayiso sokugcina kumamukeli ukuze axazulule inkinga noma abhekane nempi yenkantolo.
Isaziso esingokomthetho siyidokhumenti elula kepha idinga izinga eliphakeme lokuqapha esethulweni sayo ukuhambisa umyalezo kahle. Ummeli we-UAE noma uchwepheshe wezomthetho angasiza ekubekeni ndawonye isaziso sezomthetho ngokuya ngemithetho yezwe ekhona. Isaziso somthetho kufanele siqukathe inkinga esifuna ukuyisingatha, isinqumo esifunwayo kanye nesikhathi esifanele udaba okufanele silungiswe ngalo, bese sithunyelwa ngeposi elibhalisiwe.
Ungasithumela Nini Isaziso Sezomthetho
Ukuthumela inothi yezomthetho kuhlale kuyindlela enhle yokubonisa ukuthi awuhlosile ukumunca ngokuphelele ubuhlobo. Isaziso esingokomthetho ku-UAE isinyathelo sokuqala ngaphambi kokuqulwa ngokusemthethweni. Kungathunyelwa kumuntu noma inkampani enamalungelo okuphulwa umthetho noma eye yalimala ngomthetho othile ukunika iqembu elitholelayo ithuba lokugcina lokuxazulula noma iyiphi ingxabano ngaphandle kwenkantolo. Izimo ezithile zidinga ukuthumela isaziso sezomthetho, futhi zifaka:
Isaziso esikhishwe umqashi kumqashi ngokwephula imigomo kwinkontileka yokuqashwa, ukuhlukunyezwa ngokocansi kwalowo osebenza naye, ukwephulwa kwezinqubomgomo zenhlangano yakwa-HR, ngokuzumayo ahambe ngekhefu ngaphandle kwesaziso esisemthethweni, njll.
Isaziso esivela kumqashwa siye kumqashi ngomholo obambezelayo noma ongakhokhelwa, wephula isivumelwano somsebenzi, ukunqanyulwa ngaphandle kwesizathu esizwakalayo, njll.
Isaziso esikhishwe ngokumelene nomnikeli wesheke uma kwenzeka isheke lisenkingeni.
Izingxabano ezihlobene nempahla ezinjengokungempahla kanye nobunikazi bezingxabano, ukuxoshwa okungazelelwe kwabahlali, njll.
Izingqinamba zomndeni ezifana nesehlukaniso, ukugcinwa kwengane, noma izingxabano maqondana namafa, njll.
Isaziso ezinkampanini ezikhiqiza isikhalazo ngokulethwa kwemikhiqizo esezingeni eliphansi noma ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezinephutha, njll.
Izinsizakalo zethu Zokuthumela Isaziso Sezomthetho
Ungaqasha ummeli onolwazi ukukusiza ekubhaleni inothi yezomthetho esebenzayo futhi uyisebenzele iqembu elizenzakalelayo. Lolu hlobo lommeli luzoxoxa nawe ngalesi simo, luhlole wonke amaqiniso ezindaba futhi lukweluleke ngazo zonke izindlela ezingaba khona ezingokomthetho, futhi lusize ekubhaleni isaziso esifanelekile somthetho ngaphambi kokusebenzela ophikisana naye.
Nansi indlela inqubo eqhubeka ngayo:
Kuqala ngeseshini yezeluleko zomthetho ngocingo, online, noma ehhovisi lapho ummeli ephendula imibuzo yakho futhi anikeze nezeluleko. Uma ummeli esethole yonke imibhalo ephathelene nalolu daba, uzoxoxa nawe ngesimo leso bese esincoma ukuthi singasebenza kanjani.
Ummeli wakho uzobhala inothisi yezomthetho futhi ayithumele kuwe ukuthi ibukeze futhi ivume.
Uma sekuvunyelwe, ummeli uzonikeza umphikisi wakho inothisi ngeposi elibhalisiwe, ifeksi, noma i-imeyili.
Amalungelo amaklayenti-amaklayenti avikela noma yiluphi ulwazi nemibhalo owabelane ngayo nommeli wakho.
Yize kungewona wonke amacala adinga ukuthi kuthunyelwe isaziso esingokomthetho, kodwa-ke, kuthunyelwa abameli ngethemba lokuthi izingxabano phakathi kwamakhasimende abo nomphikisi kungaxazululwa ngaphandle kwenkantolo. Ukuthumela inothi yezomthetho kuvumela umthumeli ukusungula inhloso yakhe yokuthola isinqumo ngodaba nalowo owemukelayo ngaphandle kokuphikisana nokuqhubeka kwenkantolo ende.
Singakusiza ekulungiseleleni nasekuthumeleni isaziso esisemthethweni.
Indlela esemthethweni yokusebenzisa isaziso